ASCWR,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Walaalayaal waan idin salaamay. Waxaa halkaan ku lifaaqan sawirro, naqshado iyo waraaqo sharci ah oo laga soo qaaday mashruuc masaajid oo laga hirgelindoono magaalada Ghaydah ee gobolka Al Mahra. Masjidkaas oo loogu magacdaray ' MASJID CAA'ISHA' ummul mu'miniin waxaa mulkiyadda dhulkiisa la soo wareejiyeye bishii March 9dii, 2010. Dhulka masjidku ku fadhiyo waa 1,320 square meter ama 14,201 square feet wuxuuna ku yaal degaan ka tirsan magaalada Ghaydah oo aan horay masjid uga dhisnayn. Soo wareejinta milkiyadda dhulka waxaa ku baxday lacag dhan $12,000 ( laba iyo toban kun oo American dollar ah).
Ilaahay xasanaad iyo ajarba ha ka siiyee waxaa lacagtaas ku tabarucday Caasha Faarax Weyrax oo ka mid ah hooyooyinka beesha Meheri ka dib markii ay siyaaro ku tagtay gobolka Al Mahra ee Yemen. Mashruucu wuxuu bilaabandoonaa dhowaan, waxaana lagu qiyaasay in dhismahiisa lagu taabba gelindoono lacag gaaraysa $60,000 - $70,000 ( lixdan kun ilaa iyo todobaatan kun oo American Dollar ah).
Dhammaaan muslimiinta deggan agagaarka meesha mashruuca masjidku ka dhaqangelayo ayaa aad u soo dhaweeyey oo u riyaaqay arrintaas. Dadkaasi waxay ku soo gudanjireen waajibaadka salaadahooda masaajidyo aad uga fog degaankooda.
Mashruucaan oo ah mid lagu dhisayo guri eebe wuxuu noqondoonaa mid khayr iyo danbidhaaf fara badan lagu mutaysto. Sidaa darteed waxaa laga codsanayaa dhammaan muslimiinta meelkasta oo ay joogaanba inay ka qaybgalaan fulintiisa. Walaalayaal aynu u kala hormarno khayrka oo ku tartanno sidii loo kala boobilahaa. " Qofkii bayt ilaahay dhisa, isagana wuxuu eebe bayt uga dhisayaa jannada" - waa xadiith nabawi ah.
Waqti dhow waxaa la magacaabidoonaa guddi sare oo loo xilsaarayo uruurinta lacagta iyo dhammaystirka dhismaha masjidka. Guddigaas waxaa hoggaamindoona Sheikh Cali Sheikh Mursal oo deggan magaalda Vancouver ee dalka Canada.
Waad mahadsantihiin. Ialaahay ha ka dhigo mashruucaan mid khayr ku bilowda oo hadana khayr ku dhammaada.